प्रेमले भरिएको खड्काको पहिलो पुस्तक "मनको-अदालत, प्रकाशनको अन्तिम तयारीमा - Saptakoshionline
प्रकाशित मिति: सोमबार, पौष १६, २०७५ समय: १३:५९:३६
युवाहरुको ढुकढुकी बन्न सफल एक चर्चित रेडियो कार्यक्रम मनको अदालतका प्रस्तोता अनुज खड्काले, जीवन र प्रेमको बास्तबिकतामा आधारित पुस्तक मनको अदालत प्रकाशन गर्न लागेका छन । बिषेशगरी प्रेममा आईपर्ने अनेकन जटिलताहरुलाई सरल अबिब्यक्तिमा प्रस्तुत गरिने बहुचर्चित कार्यक्रम मनको अदालतकै नाममा प्रकाशनमा आउन लागेको पुस्तकमा पनि प्रेमका विभिन्न आयामहरु समेटिएको खड्काले बताएका छन । मान्छेको मन र मस्तिष्क बिच उत्पन्न हुने अन्तरद्वन्दलाई परिभाषित गर्दै, प्रेमको कठिन परिस्थितिमा सहज जीवनयापनको निम्ति पुस्तकले मद्दत गर्ने पुस्तकका लेखक खड्काको भनाई छ ।
“आफुलाई माया गरे जस्तै गर्ने र आफूले धेरै माया गर्ने कुनै एक त्यस्तो ब्यक्ती, आफैसङ्ग अलगियो भन्दैमा कहाँ टुङ्गिन्छ र यो जिन्दगी । बाच्नु त छदै छ । बाच्नु छ भने हासेर किन नबाच्ने ? बितेको बिगतलाई सम्झिएर, भैरहेको बर्तमान बिगार्ने मान्छे कसरी प्रेमी हुन सक्छ”
मनको अदालत भित्र यस्तै अनेकन मनछुने कथाहरु समेटिएका छन । जसले तपाईलाई तपाईको परिस्थिती अनुसार सम्हालिन सहयोग गर्ने छ ।
मनको बहकाउबाट तपाईलाई जोगाउदै, जीवनको सार्थकता खोज्न मनको अदालतले प्रेरणा दिनेमा लेखक खड्का बिश्वस्त रहेको बताउनुहुन्छ । पाचपोखरी प्रकाशन गृहबाट प्रकाशन हुन लागेको पुस्तक, अहिले प्रेसको अन्तिम अन्तिम चरणमा रहेको बराईएको छ । मनको अदालत प्रकाशनका लागि लाग्ने खर्च भने सोलुखुम्बुका प्रेम बहादुर लामिछनेले गर्नुभएको हो । “हरेक ब्यक्तिले एक पटक पढ्नैपर्ने कथाहरुको संगालो हो मनको अदालत, त्यसैले यसमा पैसा लगाएको हु” लामिछनेले भन्नुभयो ।
समाजले प्रेमलाई हेर्ने दृष्टिकोण, प्रेमबाट मान्छेले पाउने आनन्द र पिडा, जातिय बिभेदका कारण टुङ्गिएको प्रेम, प्रेम पाईसकेपछि मान्छेको जिन्दगीमा पर्ने प्रभाब र गुमाईसकेपछी पर्ने असरलाई पुस्तक भित्र निक्कै कलात्मक तरिकाले उठान गरिएको छ । लेखक खड्का भन्छन, “प्रेम मान्छेको त्यो उपलब्धी हो- जसले खुशी र पीडा दुबैको अनुभूति दिलाईदिन्छ मान्छेलाई, तिनै अनुभुतीहरुलाई शब्दको माध्यमद्वारा ब्यक्त गरेको छु-मनको अदालतमा ।
मनको अदालत भित्र के छ ? भन्ने प्रश्नमा लेखक खड्काले भने :
उत्तर : धेरै कुराहरु छन । जसमध्य केही यी पनि हुन । यस्ता अरु थुप्रै कुराहरु समेटिएको छ । मनको अदालतमा ।
“सम्झनाहरुको बाछिटाले रुझेको मन र त्यही मन पग्लिएर बगेका आसुहरुले चिसिएको परेली कहिल्यै ओभानो नहुदो रहेछ । “
“ठेगाना मेटिएको खत र बिर्सन नसकिएको बिगत लगभग उस्तै हुदो रहेछ । न मिल्काउन सकिन्छ- न त निर्धक्क खोलेर पढ्न नै ।”
“बिर्सिदेउ अब मलाई भनेर जानेहरुले, बिर्सने उपाय पनि भनेर गैदिने हो भने कति सरल बन्थ्यो होला है जीवन ?”
“मान्छेले छोडेर गएपनी, उसका यादहरुले किन लघारिरहन्छन होला मान्छेलाई ? के यो यादहरु भुलाउने कुनै ओखती हुन्छ होला ? सम्झनको लागि त अनेक उपयहरु छन । तर बिर्सनको लागि चाहिँ के गर्ने होला ? यी यादहरु आउने बाटो थुन्न सकिन्छ कि सकिँदैन होला ? कहाबाट आउछन यी यादहरु । बिना कुनै साधन ? बिना कुनै ईन्धन ? “
“म त चिसो मान्छे । न त हिउँ झै जम्न सके न नदि झै बग्न नै सके । फगत चिसिएको सम्बन्धमा आफै चिसिएर बाचिरहेको छु । सम्बधहरुको कारोबारले जिन्दगी टाट पल्टाईदिए पछि मनको ब्यापारमा मायाको नोक्सान ब्यहोरेको नमिठो अनुभव छ म सङ्ग !”
युवा पाठकहरु माझ निक्कै लोकप्रीय बन्ने अपेक्षा गरिएको मनको अदालतको भाषा सम्पादन, करिब एक दर्जन भन्दा धेरै पुस्तक लेखिसक्नु भएका लेखक रोशन दाहालले गर्नुभएको छ । सम्पादक दाहालले नेपाली साहित्यमै मनको अदालत पृथक बिधा भएको बताएका छन । उनी भन्छन “मुक्तक संग्रहहरु त धेरै छापिएका छन नेपालमा तर मुक्तकबाट कथाको उठान गरेर, मुक्तकले नै टुङ्ग्याएको यो पहिलो पुस्तक हो । मुक्तकको भाबमा कथा लेख्नु र कथाको भाबमा मुक्तक सिर्जना गर्न सक्नु लेखकको अद्दितिय क्षमता मान्नुपर्छ ।”
जिन्दगी देखि नै तर्सिदै बाचिरहेको छु ।
सम्झनाहरुमा छटपटिदै बाचिरहेको छु ।
न त दैब मेरो भयो न त आफ्नो कोहि ।
बाध्यतामा रुमलिदै बाचिरहेको छु ।
मनको अदालतमा समाबेश एक मुक्तक हो यो । यस मुक्तकको भाबमा करिब ५ पेज लामो कथा पनि छ । बाध्यतामा रुमलिदै बाच्नुपर्ने बिबशतालाई कथामा उठान गरिएको छ । यस्तै अन्य ५२ ओटा कथा र करिब १५० भन्दा धेरै मनछुने मुक्तकहरु पुस्तक भित्र समेटिएका छन ।
पुस्तकको बारेमा पाचपोखरी प्रकाशन गृहका राम श्रेष्ठ भन्छन “यो पुस्तक सुरुमा पठाउदा कुनै फन्टुस प्रेम कथा र रोनाधोनाले भरिएको होला भन्ने लागेको थियो । तर यो त रोनाधोनाबाट कसरी उम्कने भन्ने अचुक उपाय रहेछ । पढेपछी मात्र थाहा भयो । हामी आफैले प्रकाशन गर्छौ । खर्च पनि आफै गर्छौ भन्ने प्रस्ताब राख्दा, लेखक स्वयमले अर्को पुस्तक चाहिँ गरौला भन्नू भो । जे होस मनको अदालत अन्य प्रेमिल कथा समर लभ, साया, मनसुन र यस्तै अरु अरु पुस्तकहरु भन्दा पनि उत्कृष्ट लाग्यो । पुस्तकले मेरो जस्तै धेरैको मन जित्नेमा ढुक्क छु ।”
पुस्तकको पेज र कभर भने ग्राफिक्स डिजाईन काठमान्डौद्वारा गरिएको हो । आउदो माघमा बिमोचन गर्न लागिएको पुस्तकको हजारौ प्रतिहरु पहिले नै अग्रिम बिक्री भैसकेको जनाईएको छ । यसको दोस्रो संस्करणको तयारीमा पनि जुट्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रकाशकले बताएका छन ।
गोरखा जिल्लाको पालुङटार नगरपालिका ७ बिरुवाटारमा जन्मिएका खड्का, रेडियो यात्राका दौरान नेपालका विभिन्न जिल्लाहरुमा पुगेका छन । चितवन जिल्लाको खैरहनी नगरपालिका ४ पर्सा बजारमा सेल्फ अपरेटिङ सिस्टमबाट पहिलो पटक संचालनमा आएको ग्रेट एफ.एम ग्रेट कम्बिनेशन 106.4 मेगाहर्जबाट आफ्नो रेडियो यात्रा सुरु गरेका खड्काले, सुनसरी र सोलुखुम्बुका केही रेडियोहरुमा पनि आफ्नो खुबी देखाएका छन । उनको करिब १ दाशक लामो रेडियो यात्राको क्रममा, दर्जनौ लोकप्रीय कार्यक्रमहरु प्रसारण भैसकेको छ । पछिल्लो समय राजनितिक टिप्पणी र समाचार लेखनमा पनि आफूलाई अब्बल देखाउन सफल खड्काका चर्चित रेडियो कार्यक्रमहरुमा, बल्झिरहने बिगत, एउटा कथा जिन्दगीको, जीवन दर्शन, पारिजात, स्रष्टा र सिर्जना लगायत रहेका छन ।
पुस्तक “मनको अदालत” उनको पहिलो कृति हो । उनी भन्छन ” सिर्जनाहरु धेरै गरियो तर प्रकाशन गर्न नसक्दा सबै हराएर गयो । मनको अदालतलाई भने सुरक्षित गर्न सफल भए” ।
उनले काम गरेका केही संचार माध्यमहरु अन्तर्गत चितवनको ग्रेट एफ.एम, रेडियो अर्पण । सुनसरीको रेडियो पुर्बोदय र रेडियो परिवर्तन । सोलुखुम्बुको हिमाल एफ.एम लगायत रहेका छन । उनको कार्यक्रम नेपालका अन्य रेडियोहरुबाट पनि प्रसारण हुने हुदा अन्य रेडियोसहरुसङ्ग पनि खड्काको नजिकको सम्बन्ध रहेको छ । सिराहाको ढुकढुकी एफ.एम लगायत अन्य थुप्रै रेडियो तरङ्गहरुमा खड्काको लोकप्रीय कार्यक्रमहरु प्रसारण भएका छन ।
अहिले भने लेखक तथा संचारकर्मी खड्का पुर्णकालिन लेखक वनेका छन । मनको अदालत लगतै उनको आवरण भित्रको अनावरण प्रकाशनको तयारीमा रहेको बताईएको छ । खासगरी युवाहरुलाई लक्षित गरि पुस्तक लेखनमा ब्यस्त बनेका उनको पहिलो पुस्तक मनको अदालत प्रेममा आधारित भएपनी, दोस्रो पुस्तक आवरण भित्रको अनावरण भने बिल्कुनै फरक रहेको उनी बताउछन । सम्भाबनाहरुको खोजी गर्दागर्दै हार स्वुकार्न बाध्य बनेकाहरुको लागि जितको आशा जगाउने पुस्तकका रुपमा आवरण भित्रको अनावरण लेखिरहेको उनले जानकारी दिएका छन ।